shaandhada birta ah ee birta ah ee galvanized ee daloolsan
Mesh qurxinta birta
Shabakadda tolmada leh ee Square
Kala shaandheynta walxaha
Shabakadda xargaha qurxinta ee Met...
Qurxinta Birta Aan Lahayn
Mesh bir ah oo tolsan oo wiish ah...
Qurxinta / qaybinta / ee...
Qurxinta gidaarka dibadda qolka...
Qalabka caadiga ah waxaa ka mid ah US304 (AISI304), SUS316 (AISI316) iyo SUS316L (AISI316L). Birta daawaha gaarka ah, Hastelloy, Monel iyo Inconel waxaa loo isticmaali karaa si waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
Maaddada shaandhada shaashadda birta ah ee godadaysan
Cabirka: cabbirada caadiga ah waa 500x1000mm, 600x1200mm, 1000 x1000mm iyo 1200 x1200mm. Cabbir kasta oo ka mid ah xadka sare waxaa lagu habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Soo bandhigida element filter silig wedge
Tuubbada shaashadda qaabaysan waxaa sidoo kale loo yaqaan tubbada shaashadda qaabkeeda gaarka ah, tuubbada shaashadda V-qaabeeya iyo tubbada shaashadda qaabaysan.
Waxay ka kooban tahay dhululubo V-qaabeeya oo ay ku wareegsan tahay usha taageerada ee si dheer loo dhigay.
Isgoysyada khadka astaanta iyo usha taageerada waa in si fiican loo alxaan.
Oogada siman, xannibaadda lidka ku ah iyo qaabdhismeedka adag.
Shaashadda alxanka ayaa ah badeecada ugu horumarsan tignoolajiyada casriga ah, taas oo loo isticmaalo baadhista, sifaynta, fuuqbaxa, qalajinta iyo nadiifinta warshadaha kala duwan.
Isku darka kala duwan ee fiilada iyo usha taageerada. Kala duwanaanshaha godadka u dhexeeya xadhigga iyo usha taageerada waa ballaaran, si aan u naqshadeyno shaashadda sida waafaqsan shuruudahaaga.
Tilmaamaha shaandhada shaashadda ee SS-ka
Waxyaabaha: birta aan fiicnayn AISI 430, 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, Monel
booska Afyare: laga bilaabo 0.05mm ilaa 10mm.
Cabbirka: Φ 25mm - Φ 2500mm.
Shuruudaha lacag-bixinta: L / C, t / T, D / P, Xawaaladaha Western Union, PayPal, xawaalad degdeg ah, lacag caddaan ah
Nooca: nadiifiyaha biyaha ozone
Waxqabadka: shaandhada saxda ah
Shahaadada: CE, GS
Faa'iidooyinka shaandhada shaashadda ee SS
1. Darajooyinka joogtada ah waxay si weyn u kordhiyaan aagga bannaan ee la heli karo, sidaas darteed waxay si weyn u siinaysaa helitaanka aagga biyaha qaada
2. Socod aan kala go' lahayn.
3. Nadiifinta joogtada ah waxay garanaysaa labbiska iyo horumarka hufan ee ceelka.
4. Xoog wanaagsan oo aan lahayn qaab-dhismeed taageero dheeraad ah.
Codsiga shaandhada shaashadda ee SS
Tuubooyinka shaashada ee joogtada ah ayaa lagula talinayaa xaaladaha soo socda:
Samaynta ka kooban qaybo yaryar ama ganaax
Ceelal quruurux ah ayaa la rakibayaa
Biyo-mareen khafiif ah, oo u baahan meel bannaan oo ugu badan
Dhexroor yar si fiican
Hore: Birta aan fiicnayn ee Johnson birta aan fiicnayn ee v-wire shaashadda ceelka
Xiga: Shaashadda mesh-wareegga ee birta aan-dhalatada lahayn, shaashadaha wax-ka-baxa waxay shaandheeyaan xirmo mesh ah
Alaabooyinka la xidhiidha
Dambiil silig bir ah oo aan nadiif ahayn caafimaad...
Soo bandhigida badeecada dambiisha jeermiska birta ah ee birta 1. Qalabka dambiilaha ah ee birta ah: 302, 304, 304L, 316, 316L iyo qalabka kale ee birta ah 2. Habka wax soo saarka ee dambiisha jeermiska birta: Mesh bir ah oo aan bir lahayn, mesh feeray, alxanka argon, alxanka caabbinta, iwm.
Fiiri alaabooyin badan >
Birta aan fiicnayn ee heerkulku sarreeyo ee fiber-ka-soo-baxa
Astaamaha ugu muhiimsan waa porosity sare iyo qulqulka aadka u fiican, luminta cadaadiska yar iyo qulqulka weyn; Awoodda bulaacadaha waaweyn, saxnaanta sifaynta sare iyo cadaadiska sare ee isticmaalka wareegga dheer ee beddelka; Waxay leedahay iska caabin heerkul aad u fiican iyo iska caabin daxalka, waxaa loo isticmaali karaa waqti dheer at 600 ℃, oo iska caabin kara daxalka ee nitric acid, alkali, dareere organic iyo daroogada; Hirarka waa la jebin karaa si loo kordhiyo aagga shaandhaynta, alxanka ayaa ka dhigi kara dareeraha mid adag
304/316 shaandhada shaandhada birta ah ee caadiga ah
Shaandhee wax 304, 304L, 316, 316L ahama feeray mesh, mesh-todday, mesh alxanka koronto, mesh naxaas ah, mesh bireed aluminium, iwm Astaamaha kartoonada filter hal iyo multi-lakab booska alxanka filter kartoonada, shaandhaynta iyo shaandhada ayaa leh. shaandhaynta wanaagsan ee qaybaha 1-500um iyo dareeraha, oo leh qulqul weyn halkii unug, waxaana dib loo isticmaali karaa nadiifinta ka dib. Habka wax-soo-saarka ee kartoonada shaandhada Ka dib goynta saxanka - wareegsan - alxanka ...
Shaashad mesh wareeg ah oo bir ah oo aan bir lahayn, extruder ...
Shaashadaha Extruder waxay shaandheysaa baakidhka guud ee mesh-ka iyo walxaha Shaashadda maro fidsan ee balaastigga ah ee sifaynta dhalaalidda caaga ah Shaashadda polymer dhalaalaysa shaandhaynta shaandhaynta iyo daabka silig birta ah mesh extruder saxannada filter-ka-miiraha ee birta-la-saaray ee sintered saxaarad siligga silig ah iyo bac Dib-u-celinta shaandhaynta siliga birta aan fiicnayn ee shaashadda Multilayer extrusion scr ...
Birta aan fiicnayn 304/316 multilayer sintered ayaa kulmay ...
Birta aan lahayn 316 silig barbecue tayo sare leh ...
Shayga aan birta lahayn ee barbecue mesh silig bir ah, silig kaarboon galvanized hooseeya. Dharka iyo sifooyinka: timaha iyo alxanka; Iska caabbinta heerkulka sare, ma laha qallafsanaan, ma laha miridhku, aan sun ahayn iyo dhadhan la'aan, fududahay in la isticmaalo; Qaabka mesh birta ah ee barbecue waxay u qaybsan tahay wareegsan, laba jibaaran, arc, iwm
Jinyi Road North, degmada Anping, Shiinaha
Hot Tags, Alaabooyinka Kulul, Khariidadda goobta